''ဆံသားကောကျသော အမြိုးသားမြားအတှကျ စတိုငျကစြရေနျ နညျးလမျးအခြို့'' -
အခြို့အခြို့သောအမြိုးသားမြားရဲ့ ဆံသားတှဟော ကောကျကွောငျးရှိတဲ့ သဘောမြိုးဖွဈပွီး အခြို့အခြို့သောအမြိုးသားမြား မှာတော့ ဆံသားတှဟော ကောကျကောကျကှေးကှေးတှေ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
ဒီလိုဆံသားကောကျကွောငျး ရှိတဲ့ အမြိုးသားတှနေဲ့ ဆံသားကောကျကှေးနတေဲ့ အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဆံပငျကို ပုံစံကနြ လှပအောငျ ပုံဖျောဖို့ ခကျခဲတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုပွဿနာတှကေို ဘယျလို ဖွရှေငျးမလညျး?
သငျ့ရဲ့ဆံပငျသားတှေ ကောကျကှေးပွီး ဆံသားဟာ ကွမျးနတေယျဆိုရငျ သငျ့မှာ ဆံသားတှေ ထူထဲမှုကွောငျ့ ပုံသှငျးရ ခကျခဲတတျပါတယျ။ သငျခေါငျးလြှျောတဲ့အခါ ခေါငျးလြှျောရညျထဲမှာ ပြော့ဆေးကိုပါ ပေါငျးစပျထားတဲ့ ရှမျပူမြိုးကို သုံးပေးပါ။
နစေ့ဉျလညျး ခေါငျးလြှျောပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ခေါငျးလြှျောပွီးတဲ့အခါ ဆံသားကို ခွောကျသှအေ့ောငျ သုတျပွီးနောကျ ဂယျြလျအမြိုးအစားပါဝငျပွီး ရဓောတျပါဝငျတဲ့ ခေါငျးလိမျး အလှဆီကို သုံးပါ။ ခရငျမျနဲ့ ဂယျြလျအမြိုးအစားက သငျ့ဆံသားကို ပုံစံကနြကာ တဈနကေုနျ စတိုငျကနြစေမှောပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲ့သညျ့လို ဆံပငျသားမြိုးဟာဆိုရငျ ဆံသားတှဟော ဦးခေါငျးမှာ ကပျနတေတျပါတယျ။ ဒီလိုဦးခေါငျးမှာကပျပွီး ခပျပါးပါးဖွဈနပေမေဲ့ လိုသလို ပုံဖျောနိုငျတဲ့ ဆံသားမြိုးသာ ဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျ အပြော့စား ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ ခေါငျးလြှျောပေးနိုငျပွီး ကျောပါဝငျတဲ့ ဆံပငျဖွနျး စပရေးကို သုံးနိုငျပါတယျ။
သငျ့မကျြနှာနဲ့ လိုကျဖကျမဲ့ ဆံပငျပုံစံ ဒါမှမဟုတျ သငျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ဆံပငျပုံစံကို ကွာရှညျခံစဖေို့ ဆံသားကို ခပျတောငျ့တောငျ့ ဖွဈနစေမေဲ့ ကျောပါဝငျတဲ့ ခေါငျးလိမျးဆီ ဒါမှမဟုတျ ဖနျြးတဲ့ စပရေးမြိုးနဲ့ ပုံဖျောပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
”ဆံသားကောကျပွီး ပုံမှနျဆံသား ရှိသူမြားအတှကျ”
အခြို့သောသူမြားမှာ ဆံသားတှကေ ကောကျနသေျောလညျး ဆံသားရဲ့အကွောကတော့ ပုံမှနျဖွဈ နလေရှေိ့ ကွပါတယျ။ ဒီလိုဆံသားပိုငျရှငျ အနနေဲ့ကတော့ ကွိုကျနှဈသကျရာ ခေါငျးလြှျောရညျ အမြိုးအစားကို ရှေးခယျြနိုငျပွီး တဈပတျမှာ သုံးကွိမျလောကျတော့ ရဓောတျပါဝငျတဲ့ ခေါငျးလြှျောရညျမြိုးကို သုံးပေးပါ။
ဆံသားတှေ ပိုမိုတောကျပွောငျစဖေို့ ဆံပငျပုံဖျောခြိနျမှာ သံလှငျဆီ ဒါမှမဟုတျ ဂြိုဂြိုးဘား အဆီပါဝငျတဲ့ ခေါငျးလိမျးတဲ့ အလှကုနျမြိုးကို ရှေးခယျြပါ။ ခရငျအမြိုးအစားကတော့ သငျ့ဆံသားနဲ့ ဆံပငျပုံကို ပိုမိုကွာရှညျခံပွီး ပုံကွနစေမှောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆံသားကောကျတဲ့ အမြိုးသားမြား စိတျခမျြးသာစှာ ဆံပငျကို စတိုငျကလြှပ နစေမှောမို့ လိုကျနာကွညျ့ကွပါစို့။
”ဆံသားကောက်သော အမျိုးသားများအတွက် စတိုင်ကျစေရန် နည်းလမ်းအချို့”
အချို့အချို့သောအမျိုးသားများရဲ့ ဆံသားတွေဟာ ကောက်ကြောင်းရှိတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်ပြီး အချို့အချို့သောအမျိုးသားများ မှာတော့ ဆံသားတွေဟာ ကောက်ကောက်ကွေးကွေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆံသားကောက်ကြောင်း ရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေနဲ့ ဆံသားကောက်ကွေးနေတဲ့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဆံပင်ကို ပုံစံကျန လှပအောင် ပုံဖော်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလည်း?
သင့်ရဲ့ဆံပင်သားတွေ ကောက်ကွေးပြီး ဆံသားဟာ ကြမ်းနေတယ်ဆိုရင် သင့်မှာ ဆံသားတွေ ထူထဲမှုကြောင့် ပုံသွင်းရ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ သင်ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲမှာ ပျော့ဆေးကိုပါ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ရှမ်ပူမျိုးကို သုံးပေးပါ။
နေ့စဉ်လည်း ခေါင်းလျှော်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ ဆံသားကို ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပြီးနောက် ဂျယ်လ်အမျိုးအစားပါဝင်ပြီး ရေဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ခေါင်းလိမ်း အလှဆီကို သုံးပါ။ ခရင်မ်နဲ့ ဂျယ်လ်အမျိုးအစားက သင့်ဆံသားကို ပုံစံကျနကာ တစ်နေကုန် စတိုင်ကျနေစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့သည့်လို ဆံပင်သားမျိုးဟာဆိုရင် ဆံသားတွေဟာ ဦးခေါင်းမှာ ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဦးခေါင်းမှာကပ်ပြီး ခပ်ပါးပါးဖြစ်နေပေမဲ့ လိုသလို ပုံဖော်နိုင်တဲ့ ဆံသားမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် အပျော့စား ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ခေါင်းလျှော်ပေးနိုင်ပြီး ကော်ပါဝင်တဲ့ ဆံပင်ဖြန်း စပရေးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
သင့်မျက်နှာနဲ့ လိုက်ဖက်မဲ့ ဆံပင်ပုံစံ ဒါမှမဟုတ် သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ကြာရှည်ခံစေဖို့ ဆံသားကို ခပ်တောင့်တောင့် ဖြစ်နေစေမဲ့ ကော်ပါဝင်တဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီ ဒါမှမဟုတ် ဖျန်းတဲ့ စပရေးမျိုးနဲ့ ပုံဖော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
”ဆံသားကောက်ပြီး ပုံမှန်ဆံသား ရှိသူများအတွက်”
အချို့သောသူများမှာ ဆံသားတွေက ကောက်နေသော်လည်း ဆံသားရဲ့အကြောကတော့ ပုံမှန်ဖြစ် နေလေ့ရှိ ကြပါတယ်။ ဒီလိုဆံသားပိုင်ရှင် အနေနဲ့ကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ခေါင်းလျှော်ရည် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး တစ်ပတ်မှာ သုံးကြိမ်လောက်တော့ ရေဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးကို သုံးပေးပါ။
ဆံသားတွေ ပိုမိုတောက်ပြောင်စေဖို့ ဆံပင်ပုံဖော်ချိန်မှာ သံလွင်ဆီ ဒါမှမဟုတ် ဂျိုဂျိုးဘား အဆီပါဝင်တဲ့ ခေါင်းလိမ်းတဲ့ အလှကုန်မျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။ ခရင်အမျိုးအစားကတော့ သင့်ဆံသားနဲ့ ဆံပင်ပုံကို ပိုမိုကြာရှည်ခံပြီး ပုံကြနေစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆံသားကောက်တဲ့ အမျိုးသားများ စိတ်ချမ်းသာစွာ ဆံပင်ကို စတိုင်ကျလှပ နေစေမှာမို့ လိုက်နာကြည့်ကြပါစို့။
Total Hits : 452589